Bit By Bit - Kucherechedza maitiro - 2.3.7
Kuenderera mberi kwevanhu, kushandiswa kwemashandisirwo, uye kushandiswa kwehurongwa kunoita kuti zvive zvakaoma kushandisa madhiyabhorosi makuru ekutsvaga kudzidza kwenguva refu.
Chimwe chezvakanaka zvikuru zvezvinyorwa zvakawanda zvemashoko makuru ndezvokuti dzinounganidza dhepfu munguva. Masayendisiti ezvemagariro evanhu anoshevedza rudzi urwu rwekuwedzerwa kwenguva yenguva deta data . Uye, zvisikwa, data refu ndeyekukosha zvikuru pakudzidza kuchinja. Kuti tive nechivimbo chekuchinja kuchinja, zvisinei, chirongwa chekuyera pachako chinofanira kuva chakasimba. Mune mazwi omudzidzi wezvemagariro evanhu Otis Dudley Duncan, "kana uchida kuongorora kuchinja, usashandure chiyero" (Fischer 2011) .
Zvinosuruvarisa zhinji huru mashoko gadziriro-kunyanya bhizimisi gadziriro-vari kuchinja nguva dzose, mumwe muitiro kuti Ndicharipira vasakukurwa. Kunyanya, shanduro idzi dzinoshanduka nenzira nhatu dzinokosha: huwandu hwevanhu hunoshanduka (huchishandurwa kuti ndiani ari kuvashandisa), kuchinja kwehutsika (kuchinja maitiro ayo vanhu vari kuvashandisa), uye kurongeka kwenzira (kuchinja mumamiriro acho pachako). Idzi nhatu dzinotungamirira kumhanyo dzinoreva kuti chero ipi zvayo mune imwe nzvimbo huru yemugodhi inogona kukonzerwa nekushandurwa kunokosha munyika, kana kunogona kukonzerwa neimwe nzira yekudhonza.
Chinhu chekutanga chekudonha-kuwanda kwevanhu-kunokonzerwa nekushandurwa kune uyo ari kushandisa sarudzo, uye izvi zvinogona kuitika pane zvishoma uye kwenguva yakareba timescales. Semuenzaniso, panguva yekusarudzwa kweMutungamiri weUnited States wegore ra2011 muyero we tweets nezvematongerwo enyika akanyorwa nevakadzi vari kuchinjwa zuva rimwe nerimwe (Diaz et al. 2016) . Nokudaro, chii chinogona kuonekwa sechishanduko mumamiriro e-Twitter-verse ingangodaro ichangova kuchinja kune anotaura chero nguva. Mukuwedzera kune izvi zvenguva pfupi kuchinja, kwakave zvakare kwakave kwenguva yakareba mafambiro emamwe mapoka evanhu vachigamuchira nekusiya Twitter.
Mukuwedzera kune kuchinja kune uyo ari kushandisa sarudzo, panewo kuchinja kwokuti nzira yacho inoshandiswa sei, iyo ine inonzi kushambadzira kwekuita. Semuenzaniso, panguva yekubvumira kwaGeody Gezi muna 2013 muTurkey, vapanduki vakashandura kushandiswa kwavo kweahhtagag sezvo kupesana kwakashanduka. Hezvino Zeynep Tufekci (2014) akarondedzera kukanganisa kwekuita, izvo zvaakwanisa kuona nokuti aive achicherechedza maitiro pa Twitter uye nemunhu:
"Chii chakanga chaitika ndechekuti nokukurumidza apo kupesana kwakava nyaya huru, vanhu vakawanda ... vakamira kushandisa ma-hashtag kunze kwekuti vataure nezvechiitiko chitsva ... Kunyange zvazvo mhirizhonga ichienderera mberi, uye yakatowedzera, ma hashtag akafa. Hurukuro dzakabudisa zvikonzero zviviri zveizvi. Chokutanga, kana munhu wose aziva hurukuro iyi, hashtag yaimbova isina kunaka uye inoparadza pamusana pezvakanyorwa zve Twitter. Chechipiri, hashtag yakaonekwa sechinhu chakanaka chekukwevera pfungwa kune imwe nyaya, kwete kutaura pamusoro payo. "
Rudzi rwechitatu rwekudonha kunotenderera. Muchiitiko ichi, haisi ivo vanhu vanochinja kana maitiro avo achichinja, asi sangano pacharo rinoshanduka. Somuenzaniso, nekufamba kwenguva Facebook yakawedzera muganhu pahurefu hwehuwandu hwemamiriro ezvinhu. Nokudaro, chero chidzidzo chenguva refu chekugadziriswa kwemaitiro chichave chakaoma kune zvigadzirwa zvinokonzerwa nekushanduka uku. Kugadziriswa kweSystem kunobatana zvikuru nechinetso chinonzi algorithmic confounding, icho chandichavhura muchikamu 2.3.8.
Kuti apedzisire, akawanda makuru makuru ehupenyu anotsvaga nekuda kwekuchinja kwaani ari kuvashandisa, mumashandisirwo ayo ari kushandiswa, uye kuti maitiro acho anoshanda sei. Izvi zvinyorwa zvekuchinja dzimwe nguva zvinonakidza mibvunzo yekutsvakurudza, asi izvi zvinoshandisa kuomesa kukwanisa kwemashoko makuru ekutsvaga kutarisa kushandura kwenguva refu kwenguva.